musha Asia Vladimir Putin Utano Hwokudzidza Plus Untold Biography Facts
CB inopa Nhoroondo Yese Yomutori Wezvematongerwo enyika weRussia Anonyanya Kuzivikanwa nezita rezita rezita "Tsar". Yedu Vladimir Putin Childhood Nhau pamwe neS Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeakajeka zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Kuongororwa kweMutungamiriri weRussia kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, nyaya yeupenyu pamberi pemukurumbira, nhoroondo yemhuri uye hupenyu hwega. Zvikuru zvakadaro, zvimwe OFF uye ON-Screen zvishoma-zvinozivikanwa chokwadi nezvake.
Hongu, munhu wese anoziva kuti iye one yevanyori vane simba uye vanotya munyika. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga nezveVladimir Putin's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Vladimir Putin Yemwana Nhau - Hupenyu hwepakutanga uye Mhuri kumashure:
Vladimir Vladimirovich Putin akaberekwa musi we 7th waOctober 1952 muLeningrad (yava kunzi saSt. Petersburg) Russia.
Akanga ari mwana wechitatu uye wokupedzisira akaberekwa naamai vake Maria Shelomova (mushandi pfiniti) uye kuna baba vake Vladimir Spiridonovich Putin (vakanyorwa muSoviet NAVY).
Jack Ma Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Putin asati aberekwa, vabereki vake vakarasikirwa nevana vaviri vechirume; Albert uyo akafa achiri mucheche pamwe neane gore rimwe chete Viktor akafa mushure mekurwara nediptheria panguva yeHondo Yenyika 2.
Naizvozvo, Putin (akafananidzirwa naamai vake pazasi) akarererwa muLeningrad semwana chete wevabereki vanodzivirira vakaita zvese zvavaigona kuti vamuchengetedze ari mupenyu uye akasimba.
Hazvishamisi kuti amai vaPutin havana kufarira zvaaida Judo semitambo yehucheche, budiriro yaive mhinduro yepamusorosoro kubva kumubereki anodzivirira zvakanyanya.
"Pose pandaienda kumusangano wekuita, aizogunun'una, 'Akaenda kundorwa zvakare.'"
Nekudaro, maitiro evabereki vake kumutambo uyu akachinja sezvo iye kwete chete akararama kutya kwavo kwekupona asi akakura musimba nehungwaru.
Vladimir Putin Dzidzo:
Putin aine dzidzo yake yepuraimari paChikoro No 193 muLeningrad. Paaiva kuchikoro, Putin aizivikanwa kuva mutambudzi uyo asina kuona chikonzero chekutora zvidzidzo zvakanyanya kusvikira asvika kuC6th grade.
“Mugiredhi rechishanu, anga asati azviwana, asi ndainzwa kugona, simba uye hunhu maari. Aive nendangariro dzakanaka kwazvo uye nepfungwa dzinonamira ”.
Akayeuka Putin Mudzidzisi Vera Gurevich.
Putin akashandura mafungiro ake nezvezvidzidzo paakanga ari muchechi yechitanhatu. Somugumisiro, akanyora kushanduka kwakanaka kune chikoro chepamusoro chinoremekedzwa, Chikoro No. 281, iyo yakagamuchira chete vadzidzi vari pedyo-vakakwana makirasi.
Paaiva kuchikoro chesekondari, Putin aitonga judo, Sambo uye aizivikanwa kuti ari mukuru weklasi yeVayona Pioneers Organization muchikoro kusvikira apedza kudzidza mu1970.
Vladimir Putin Biography Chokwadi - Basa Rekuvaka:
Paakapedza chikoro chesekondari, Putin akakurudzirwa kwenguva pfupi mumugwagwa wekusarudza basa. Murume wechidiki wechidiki uyo aida kuva mubwindo, mutyairi uye mukuru wekuchenjera akazogadzirisa kusarudza kokupedzisira.
“Ini ndaida kushanda muhungwaru. Ichokwadi, munguva pfupi yapfuura, ndakafunga kuti ndaida kuzova mufambisi wengarava, asi ipapo ndaida kuzoita huchenjeri zvakare. Pakutanga chaipo, ndaida kuve mutyairi wendege ”
Kuongorora kwekumashure kwakaitwa neanoshuvira mukuru wehungwaru kwakaratidza kuti aifanira kupedzisa koreji, kunyanya aine degree rezvemutemo asati ava mupurisa waanoda kuve iye.
Saka zvakatanga gadziriro yaPutin yekupinda mubazi remutemo weLeningrad state yunivhesiti kwaakadzidza uye akapedza kudzidza muna 1975.
Vladimir Putin Bio - Mugwagwa Kune Mukurumbira Nhau:
Mushure mekupedza kudzidza kuLeningrad State University, Putin akapinda muhurumende-inomhanyisa agency yehungwaru 'KGB' (Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti) kwaakashanda nekushandira munzvimbo dzakasiyana siyana.
Kugona kwake kuita kuti zvinhu zviitwe kwakamuwanisa kukwidziridzwa pachinzvimbo chemutungamiriri uye ipapo, mutevedzeri mukuru kumukuru wedhipatimendi muhofisi yehungwaru.
Mushure mekubata muchivande akaona Putin achidzokera kwaakaberekerwa Leningrad kwaakagadzwa kuve 'Leningrad State University' semutungamiriri aibata hukama hwepasi rose.
Iye panguva imwechete akabata basa nechinzvimbo cheMutevedzeri Wachigaro weSt Petersburg Guta Hurumende.
Vladimir Putin Biography - Simuka Mukurumbira Nhau:
Putin akazosiya KGB ndokupinda mune zvematongerwo enyika.
Iye aimbove-muchivande mumiriri ane yakanaka track rekodhi akatamira kuMoscow mu1996 uye akachengetedza chigaro chake chekutanga chezvematongerwo enyika seMutevedzeri Mukuru weMutungamiri Presidential Property Management Directorate.
Basa rake rezvematongerwe enyika rakauya nokukurumidza mukati memakore maviri sezvaakagadzwa kuita mabasa anokosha anosanganisira; Mutevedzeri Mukuru weVashandi veMutungamiri weHurezidhendi, Chief of Main Control Directorate, Mutungamiriri we Federal Federal Service uye Munyori weThe Security Council weRussian Federation.
Naomi Osaka Utano Hwokuwedzera Untold Biography Facts
Zvese kuburikidza nekugadzwa kwezvematongerwo enyika zvishoma zvaizivikanwa nezvaPutin kunze kwebasa rake rehana uye kuvimbika kune vakamutangira. Unhu uhwu pakati pevamwe hwakaita kuti iye Mutungamiriri weRussia Boris Yeltsin, vamugadze semutungamiriri weRussia mu1999.
Hazvina kutora nguva refu Boris Yeltsin airwara abva pachigaro semutungamiri, achigadzirira nzira Putin kuti ave mutevedzeri wemutungamiri muna Zvita 1999.
“Vhiki mbiri kana nhatu Gore Idzva risati rasvika, VaYeltsin vakandidaidza kuhofisi kwavo ndokuti vafunga kusiya chigaro.
Izvi zvaireva kuti ndaifanira kuzova Mutungamiri Anoshanda. Ini ndaive nepfungwa dzangu, kufunga kwangu, asi panguva imwecheteyo, paive neimwe pfungwa yandaifanira kufunga zvekare. Fate yanga ichindipa mukana wekushandira nyika padanho repamusoro uye hungave upenzi kutaura kuti, kwete. ”
Mwedzi yakati gare gare, akasarudzwa Mutungamiri weRussia musi we26th waMarch 2000. Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
Vladimir Putin Rudo Hupenyu:
Vladimir Putin akaroorwa kamwe chete. Tinokuendesa mashoko ehukama hwake hwemhuri uye rumored post-marital affair.
Putin akasangana nemukadzi wake Lyudmila Schkrebneva mushure mekunge audzwa kwaari neshamwari yake yepamwoyo Sergei Pavlovich Roldugin mukutanga kwema1980.
Doo dated kwemwedzi musati maroorana paC28th yaJuly 1983.
Hukama hwavo hwakakomborerwa neVanasikana vaviri Maria (akazvarwa 1985) naKaterina (akazvarwa 1986). Vanasikana vacho vaive vekunetseka nezvevamwe, vakatumidzwa zita rababa vavo nambuya amai uye havana zita raPutin rakakurumbira.
Putin nemukadzi wake vakagara vakaroora kwemakore makumi matatu vasati vazivisa zvirongwa zvavo zveku "runyararo" kurambana muna 30. Makore matatu gare gare Muna 2013, zvakataurwa kuti aimbove mudzimai waPutin akange aroora murume anonzi Artur Ocheretny uye akachinja zita rake zviri pamutemo.
Virat Kohli Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
Putin ave achitaurirana kuti ave muukama neimwe yenyika dzakawanda dzakanakidzwa nemitambo yevakadzikadzi Alina Kabaeva.
Alina uyo aiva gymnast asingarangariri hupenyu huri pachake uye anozivikanwa kuti akabereka mwanasikana ane vana vababa vake vasati vasati vatsanangurwa.
Vladimir Putin Hupenyu Hwemhuri:
Putin akakurira mumhuri ye3. Tinokuudzai nezvemhuri yemhuri yake.
Nezve baba vaPutin: Baba vaPutin, Vladimir Spiridonovich Putin akazvarwawo kuSt. Petersburg muna 1911.
Gamba risingazivikanwe reHondo rakanyoreswa muchiuto cheSoviet munguva yekutanga kwema1930, rakarwa muHondo Yenyika 2 uye rakashanda muhondo yekuparadza yeNKVD.
Kutumira zvemauto kuedza kwakamuona achidzokera kuhupenyu hwakajairika, achishanda semuchengeti uye gare gare foromani pabasa rekutakura.
Nehurombo, haana kurarama kwenguva yakareba zvakakwana kuti aone mwanakomana wake achisvika pakakwirira kwenzvimbo dzezvematongerwo enyika sezvaakafa mugore ra1999.
Nezve amai vaPutin: Amai vaPutin Maria Shelomova akashanda semushandi wefekitori mushure mekupona muHondo Yenyika yechipiri uyezve akabereka Putin makore mushure meBerlin Blockade. Kusvikira iye afa, mugore ra2, aizivikanwa kugara mukadzi ane mutsa, mudzimai akanaka uye amai vane rudo.
Kure nevabereki vaPutin vepedyo, sekuru baba vake Spiridon Ivanovich Putin aive mubiki. Akagadzirira vaimbova vatungamiriri veSoviet Stalin naLenin.
Vladimir Putin Biography Chokwadi - Tough Demeanor:
Kunyangwe mufananidzo wakadzvanywa waPutin airatidzika kunge akamubata akatasva bere, pane akati wandei-chaiwo mafoto ayo chinzvimbo chaProves Putin semumwe wezvematongerwo enyika anotyiwa nekuremekedzwa. Zvinosanganisira:
Kutasva bhiza pasina kupfeka mbatya uye gear munzvimbo inotonhora.
Kubatanidzwa mukutsvaka daredevil.
Pamusoro-kukunda kupikisa kubudirira sebhenda rakasviba Karate master.
Kutamba mu Icy Icy Waters.
Kusiyanisa nemhando dzakasiyana dzepfuti.
Izvo zvinonetsa sei vezvematongerwe enyika?
Vladimir Putin Mazita emazita:
Kune mazita emadunhurirwa anoverengeka ave achishandiswa kureva Putin mune rake basa rezvematongerwo enyika. Nepo mamwe emazita aine zvirevo zvematongerwo enyika, mamwe acho kungori kutamba kwemazita ake chaiwo.
Iwo maNickname anosanganisira; "Grey Kadhinari", "TSAR", "Vova", "VVP", "Volodya". Vamwe ndi "Pootie-poot", "Madimir Putin", "Pale moth", "Platov" uye "Agario Skins".
Vladimir Putin Hupenyu hweMunhu:
Putin ndiye vezvematongerwe enyika akachengeterwa kusurukirwa kwezvaiva pachena mukusarudza kwake kwemitambo isati yemauto Judo. Muchiedza chakafanana, akasimuka kusvika kumusoro kwebasa rake nekufambisa zvakanaka zvakanyanya munzvimbo dzisingada kubatana.
Kunyange zvazvo Putin achiri achiramba achinyatsogadziriswa anoenderera mberi kuratidza kuti anoshanda zvakanaka, ane rumwe rutivi rwevanhu runomubatanidza mhuri neshamwari kusanganisira bhora guru Abramovich.
Kunyanya zvakadaro, anofarira kushamwaridzana nembwa dzinovaraidza, chiitiko chinotaura zvakawanda zvekuonga kwake kuvimbika.
Maitiro ake ezuva nezuva anosanganisira kurara uye kumuka nguva dzaenda, kudya kwekuseni masikati, maawa maviri ekushambira uye maawa mashoma ekushanda usati waenda kumabasa epamutemo mumaawa ekutanga emasikati.
Panyaya dzekutenda, Putin muKristu weOrthodoxhodox uyo anombonamata nekureurura nemusi weSvondo.
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Vladimir Putin Childhood Story pamwe chete biography nhoroondo. At ChildhoodBiography, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!
Kim Jong Un Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Jet Li Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts